မိုးဝင်ရာသီကာလ ကလေးဝ - ယာကြီးလမ်းနှင့် ကလေးဝ - ရေဦးလမ်းတို့ ပျက်စီးနေသည့်အတွက် ယာဉ်များ ကလေ? - Yangon Media Group
မိုးဝင်ရာသီကာလ ကလေးဝ – ယာကြီးလမ်းနှင့် ကလေးဝ – ရေဦးလမ်းတို့ ပျက်စီးနေသည့်အတွက် ယာဉ်များ ကလေ?
မိုးဦးကျလာချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးဝ-ယာကြီးလမ်း၊ ကလေးဝ- ရေဦးလမ်းတို့မှာ လမ်းပျက်စီးမှု များပြားလာသည့်အတွက် ကလေး-ဂန့်ဂေါကားလမ်းကို အသုံးပြုသွားလာမှုများပြားလာကြောင်း ကလေးမြို့နယ် ပုဂ္ဂလိကမော်တော် ယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးဝင်းက ပြော ကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ မုံရွာ-မန္တလေး-ရန်ကုန် ဆက်သွယ်သွားလာရေး လမ်းမကြီးတွေကို တမူးခရိုင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်က ကုန်ကား၊ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း အသုံးပြုသွားလာကြတယ်။ ချင်းတောင်၊ ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊ ဟားခါးဘက်က ကားတွေလည်းအသုံးပြုသွားလာကြတယ်။ အခုမေလကုန် ဇွန်လဆန်းချိန်ကစတင်ပြီး ကုန်ကား၊ ဘတ်စ်ကား၊ အိမ်စီးကားအားလုံး ဂန့်ဂေါလမ်းဘက်က သွားလာကြတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ကလေးဝ-ရေဦး-မဟာမြိုင် ကားလမ်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာ လမှစတင်၍ အသုံးပြုခဲ့သောကားလမ်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါဒေသသည် ချင်းတွင်းမြစ်ကူးတံတား၊ မဟာမြိုင်တောအတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းကားလမ်းများဖောက်လုပ်ထားကာ ကလေးဝ- ယာကြီးလမ်းမှာ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှ စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သော်လည်း နှစ်စဉ် လမ်းပျက်စီးမှုကြီးမားသည့်အတွက် မိုးရာသီကာလတွင် ကားငယ်အချို့လောက်သာ အသွားအလာရှိ ကြသည်။
ကလေး-ဂန့်ဂေါလမ်း၊ ကလေးဝ-ရေဦးလမ်း၊ ကလေးဝ-ယာကြီးလမ်း၊ စသည့်လမ်းသုံးလမ်းမှာ ကလေး၊ ချင်းတောင်၊ တမူးဆက်သွယ်သွားလာရေး၊ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွင် အဓိကကျသည့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းမကြီးများ ဖြစ်သည်။ကလေးဝ-ရေဦးလမ်းမှာ ၁၆၅ မိုင်ဝန်းကျင်ရှိပြီး ကလေးဝ- ယာကြီးလမ်းမှာ ၁၁၅မိုင်နှင့် ကလေး-ဂန့်ဂေါပတ်လမ်းမှာ မိုင် ၂ဝဝ ဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗားနှင့် ဘောင်းဘီလဲခဲ့သော ကော့စီရယ်နီ